सर्वोत्तम सिमेन्टको संस्थापक सेयर खरिद बिक्री विवादः कस्को नाममा कति ? - Abhiyan news
१७ श्रावण २०७८, आईतवार १०:३६ अभियान न्यूजLeaveaComment on सर्वोत्तम सिमेन्टको संस्थापक सेयर खरिद बिक्री विवादः कस्को नाममा कति ?
पहिलो पटक बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्ने प्रयास गरिरहेको सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालिको संस्थापक सेयर खरिद बिक्री विवादमा यस कम्पनीको सेयर खरीद गर्नेहरूको नाम सार्वजनिक भएको छ ।
त्यसैगरी बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाकी छोरी रेबिकालाई १० हजार, नेप्से प्रमुख चन्द्रसिंह साउदकी श्रीमती सुशीलाकुमारी बोहोरालाई १० हजार बिक्री गरिएको छ । सर्वोत्तमका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले बिक्री गरिसकेको सेयरमध्ये १० हजार कित्ता सेयर शिखा अग्रवालबाट पुनः खरीद गरेको देखिन्छ ।
सुनको मूल्य प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले घट्यो
१९ आश्विन २०७८, मंगलवार ०४:०१ अभियान न्यूज
२१ भाद्र २०७८, सोमबार ००:५५ अभियान न्यूज